Kulan afar-geesood ah oo maanta laysku soo hor-fadhiisinayo axsaabta siyaasadda | Samatar's Weblog
Hargeysa (samatar)- Kulan afar geesood ah, oo lagu wado in lagu dhexdhexaadinayo, laguna faaqidayo khilaafaadka ka dhashay muddo-kordhintii golaha guurtida iyo sida laga yeelayo marka la gaadho dhamaadka waqtigii xilka loo doortay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee 15 May, ayaa la rajaynayaa in maanta laysku soo hor-fadhiisiyo saddexda xisbi-qaran iyo xukuumadda, sida ay tibaaxeen warar xog-ogaal ah oo aanu ka helay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay.
Sida ay illahaasi tibaaxeen, kulankan afar geesoodka ah, waxa loo ballansan yahay inay isugu yimaadaan 17 xubnood oo kala ah; Afar xubnood oo xisbiga Kulmiye ka socda, afar ka socda xisbiga Ucid, afar ka socda xisbiga Udub, afar ka mid ah xubnaha wasiirrada ay xukuumadu u xilsaartay hawlaha dhexdhexaadinta iyo Guddoomiyaha Gollaha Wakiillada Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), oo isu xilsaaray hawsha dhexdhexaadinta khilaafaadyada siyaasadeed ee xilligan taagan. Isla markaana, warku wuxuu intaa ku daray in guddoomiyaha wakiillada ay dhexdhexaadinta kala qaybqaadanayaan Akadeemiga Nabadda iyo Horumarinta Somaliland. Warku wuxuu intaa ku daray, in kulankan la qorsheeyay in dhinacyada siyaasadda iskaga soo horjeeda uu mid kastaaba dooddiisa ku soo bandhigo, isla markaana lagu lafo-guro arrimaha ilaa hadda laysku mari la’yahay.
Tibaaxuhu waxay iftiiminayaan in werwer badan oo laga qabay go’aan qaadashada Xisbul-xaakimka Udub awgeed lagu adkaystay in dhinaca xukuumada ay kulankan u metelaan afar ka mid ah kooxda wasiirrada ah ee Madaxweyne Rayaale u igmaday inay dhexdhexaadinta u metelaan dawladda. “Waxa lagu adkeeyay in cidda go’aanku ka go’aa ay tahay Madaxweynaha’e meesha ay yimaadaan wasiirradiisu, balse aan lagu soo lug-goyn Udub.” Ayuu tibaaxay mid ka mid ah ilo-wareedyada aanu soo xiganay. Sidoo kalena, xisbiga Udub kulankaa waxa la go’aamiyay inuu xisbi ahaantiisa halkaa ku tago. Inkasta oo dhexdhexaadinta la wado xoogga la saarayo sidii loogu guulaysan lahaa natiijo laga gaadho khilaafaadka haatan taagan, ayaa hadana sida ay wararku tibaaxeen xukuumadda iyo Xisbiga Ucid waxay u muuqdaan kuwo aanay afkaarahoodu kala fogayn marka la eego dareemada ku wajahan geedi-socodka dhexdhexaadinta, halka Xisbiga mucaaradka ah ee Kulmiye, uu weli ku adag yahay mawqifkii ay hore axsaabta mucaaradku sida wada-jirka ah u qaateen, ee ay ku sheegeen inaanay aqoonsan doonin Madaxweyne Rayaale wixii ka dambeeya 15 May oo waqtigii xilka loo doortay kaga dhan yahay. Sidoo kalena, kulankan maanta lagu wado in laysku soo hor-fadhiisiyo dhinacyo siyaasadda ku kala fog, maxay noqon karaan natiijooyinka ka soo bixi karaa, isla markaana rajo intee le’eg ayaa laga qabi karaa in dhamaan dhinacyada siyaasadu ku wada qancaan. Sababta oo ah, waxay wararka qaarkood tibaaxeen in mucaaradka gaar ahaan Xisbiga Kulmiye uu aad uga walaacsan yahay sida Madaxweyne Rayaale ugu dhaqmi karayo natiijooyinka halkaa ka soo baxa. Sidoo kalena, warar xukuumadda wasiirrada dhexdhexaadinta uga qaybqaadanaya ku dhaw-dhaw oo aanu helay ayaa sheegay inay iyaguna dhinacooda ka rajo xunyihiin sida ay heshiis ugala qaadan karaan khilaafaadyada taagan Xisbiga Kulmiye.
Ka sokow, kulankan maanta, waxa jira warar kale oo sheegaya inay kulan caawa isku soo hor-fadhiistaan Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin iyo Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo). Hase yeeshee, guud ahaanba ma jiraan warar rasmiya oo arrintan la xidhiidha oo dhinacnaba uu soo saaray.
“Saxeexa wakhtiga doorashadu macno samayn maayo”
Hargeysa (Ogaal) – Xoghayaha Guud ee xisbiga talada haya ee Udub Maxamed Ismaaciil Bulaale ayaa gaashaanka ku dhuftay in xukuumadu ka gaabisay diyaarinta saaxad lagu tartamo waxaana uu ku dooday in dib u dhaca doorashooyinka ay keentay diiwaan gelinta cod bixiyayaasha oo aan doorashooyinkii hore ku jirin, iyo Gudiga doorashada oo hawshoodii ka baydhay iyagoo dib uga dhacay wakhtigii ay ahayd in ay hawshooda bilaabaan.
Maxamed Ismaaciil Bulaale oo xalay Wargeyska Ogaal wax ka weydiiyay aragtidooda Xisbul xaakim ahaan ku wajahan xaalada dalka ka oogan iyo muranada siyaasadeed ee taagan waxa uu yidhi. “Annagu wax dhib ah oo yaala ama keeni kara khilaaf ama dadka kicin kara ma ogin.
Waxa jira doorashooyin horena waynu u soo galay, tana waxa ku soo kordhay, uun diiwaan gelinta doorashooyinka oo aynaan doorashooyinkii hore lahayn. Waana khasab in diiwaan gelin la sameeyaa doorashooyinka ka hor, mar hadii xeerkii soo baxay. Xeerkaana Madaxweynuhu waxa uu gudbiyay Golayaasha laba sano ka hor, Golaha Wakiilladuna waxay soo gudbiyeen sanadkii hore dhamaadkiisii.” “Xeerkii diiwaan gelinta oo wakhti danbe la keenay iyo Gudigii Komishanka oo iyaguna wakhtigoodii dib uga dhacay ayaa arrimaha fooda isku soo wada saaray.” Ayuu intaa raaciyay,
Bulaale waxa uu ku dooday in aanay xukuumadu ka masuul ahayn dib u dhacaasi. “Madaxweynuhu isagaa diyaarin waayay ayaan maqlaynay. Hawshana inta Golaha Wakiilladu leeyahay, Inta Komishanku leeyahay iyo Inta Madaxweynuhu leeyahay waa wax kala duwan.
Marna qolada Wakiillada ayaa haystay xeerka, marna qolada Mucaaradka ah ayaa suuragelin waayay inay isu soo dhamaystirmaan xubnaha doorashooyinka oo ay hawlgalaan.
Markii ay isu yimaadeen Komishankii oo goor danbe ahna shaqadoodii ayaa laga leexiyay oo waxa loo hogaamiyay jid khaldan, iyagoo laga faa’daysanayo cusaybkooda iyo iyagoon xeerarka iyo shuruucdooda aad u akhriyin, oo Komishankii waxay ka bilaabeen shaqadoodiiba mudo kordhin.”sidaas ayuu yidhi Bulaale waxana uu ku dooday in loo baahnaa inay Hawsha ka bilaabaan Gogol xaadhka diiwaan gelinta iyo hawleheeda. “Waxay ahayd in iyadoo la wada fadhiyo inay yidhaahdaan, wixii halkaas ayay fadhidaa wakhtigeediina ku qabsoomi mayso. Korodh siimo shan cisho ahi hadii ay imanayso cid gaar ah ayaa leh,” ayuu yidhi Bulaale.
Su’aal laga weydiiyay markii arrimahaas oo dhan laga soo gudbay sababta ay wakhtiyadii ay la sexeexdeen Axsaabta iyo Komishanka ee la isku ogaa in doorashooyinku ku dhacaan uga hor yimaadeen Udub ahaan waxa uu yidhi, “Mar walba waxaanu anagu ilaalinaynay in khilaaf dhaco, oo waxaanu lahayn Komishanow shaqadan idinkaa lehe, anaga hanaga tala galinina oo kolba halka wax marayaan uun noo sheega. Laakiin, shaqadii aad idinku (Komishanku) lahaydeen hadii Xisbiyadu ku feegaraan waxba idiin socon mayso.” Sidaas ayuu yidhi Bulaale, mar kale ayaa hadana la sii su’aalay sababta ay u diidan yihiin maadaama Axsaabtii ay heshiis la sexeexdeen. “Qodob afraad ayaanu ku darsanay oo odhanaya kolba halkay ku dabrantahay hala isla ogaado oo halaga dhaqaajiyo. Warqadbaanu u qoray Komishanka aanu leenahay, xisbul xaakim ahaan anaga xagayaga wax idiinkaga imanaya ama is hortaag ah oo dhinacayaga idinkaga imanayaa ma jiro, howshiinana qabsada dastuurka iyo xeerarka dalka u yaalana ku dhaqma. cid wal oo hawshani khusaysana qaybteeda ka wargeliya. Oo Axsaabtu ugu horayso oo Golayaashu ku jiraan, Awoodahana sida loo kala leeyahay dadka ugu shaqeeya. Waxaa ka danbaysay inay awoodii Guurtidu lahayd ee Mudo kordhinta ay iyagu (Komishanka) ay toos u qaateen. Axsaab iyo Komishan midna awood uma laha inuu wax kordhiyo.” “Haa Annagaa (Udub) ayaa wax ka saxeexnay heshiiska wakhtiga qabsoomida doorashooyinka, Maansoor bay ahayd. Carqalad taala oo markaaba khalad u bilaabantay ayay ahayd, laakiin anaga qodobkaa Afraad ayaa kayd noo ahaaye, markaaba inay khalad tahay waanu arkaynay, waxaananu aad iskaga Ilaalinaynay in la yidhaahdo Udubaa diiday wakhtigii lagu heshiiyay, warqada talada ah ee aanu bixinaynaana waa digniin waa ka hortag.” Ayuu raaciyay, “Saxeexa wakhtiga doorashadu macno samayn maayo, yaynaan is khilaafin oo kala dhaqaaqin hadaan ku idhaa oo aan warqad kuu saxeexo oo qodobkii diidayay halkan inoo yaalo, kaasuunbaynu aakhirka ku noqonaynaa.” Ayuu yidhi Bulaale isagoo hoos u dhigaya heshiiskii ay la gaadheen Axsaabta iyo Komishanka ee wakhtiga doorashada.
Waxaa uu ku dooday Bulaale in aan lagu heshiin karin in la jabiyo qodob dastuuriya isaga oo ka jawaabaya su’aal laga waydiiyay in Dastuurku ku tilmaamayo in wada tashi lagaga heshiiyo wixii muran ah ee soo dhex gala dhinacyada siyaasada. “Arrintaa waan waanta ee Gudoomiyaha Wakiilladu waday, annigu war uma hayo meesha ay marayso. Kolayba waa dedaal uun wax lagu wanaajinayo.” Ayuu yidhi.
Waxaa la weydiiyay oo Kale Xoghayaha guud ee Udub, nabad-gelyo xumada Guurtidu u cuskatay mudo kordhintu meesha ay ka jirto, iyo waliba in Guurtida lafteedu qaadatay doorkii Komishanka ee ciyimaada wakhtiga doorashada sida ay ku doodayaan mucaaradku, waxaana uu ku jawaabay. “labaduba waa aqoon darro, Nabad gelyo xumo xabad dhacaysa uun lama yidhaahdo. Macno xeel dheer ayay leedahay, wax kasta oo keeni kara nabad gelyo xumo waa nabad gelyo xumo, odhaahda ah May haday dhaafto qalalaasaa dhacaya lafteedaa ah Nabad-gelyo xumo.”
Maxamed Ismaaciil Bulaale waxa la weydiiyay sababta ay mar kasta xukuumada iyo xisbigeedu u liido Gudiga cusub ee doorashada iyadoo la ogaa in Madaxweynuhu sife qalafsan u kala diray Gudigii hore, taasoo uu sheegay in wakhtigoodu ka dhamaaday, “Hadii xubnihii qolyihii soo magacaabay dib u soo xuli lahaayeen lama diideen, laakiin meesha waxaan ku jirin in Golaha Wakiilladu yidhaahdo labasanaanu idiin kordhinay iyagoo sharci u lahayn. Hadii Guurtidu u kordhiso, lama diideen.” Ayuu yidhi Bulaale.
Xisbiga talada haya ee Udub waxay marar badan sheegeen inay diyaar u yihiin in la qabto doorashooyinka wakhti kasta oo suurtagal ah, sidaa daraadeed waxaanu wax ka weydiinay Xoghayaha guud ee Udub, sababta ay hadalkaa u soo qadimaan iyada oo aan ilaa hada Xisbigoodu qabsan shirweynihiisii. “Taasi waa howl Xisbi u gaar ah, Khilaafna kama taagna. Waxa khilaafku ka taaganyahay waxa weeye, Dastuurka iyo xeerka qaranku leeyahay ee doorashooyinka khuseeya, annaga qodobkaasay jabiyeen mar-naba lanama odhan, xukuumadaa fulin weyday waa hadal guude sideebaanu u fulin waynay, Madaxweynaha maxaa ka khuseeya, Golayaasha, Komishanka, Axsaabta maxaa ka khuseeya. Waa howl u baahan in sideeda loo kala dhigo oo cid walba inta ay eed leedahay la yidhaa intaa adigaa leh. Xukuumadu dalkay hogaamisaaye, wixii dhacaba iyadu masuul kama aha.” “Shirweynahayagu carqalad kuma aha doorashooyinka, mid xisbi iyo Guud toona. Weli Udub qaylinaysa oo shirweynahayagii maxaa loo qaban waayay leh miyaad aragtay.”ayuu raaciyay.
Waxa jira warar tibaaxaya in Xisbul xaakimku uga war-wareegayo shirweynihiisa Carqalado badan oo laga baqayo inay dhexdiisa ka bilowdaan. Xoghayaha guud ee Udub wuu ka war-wareegay taas jawaabteeda. “Shirweynaha in la qabtaa waa khasab, waanay imanaysaa wakhtigeeda hasoo baxdee, imika waxa ina hortaagani waa maxay. Mida kale, waxaan kuu sheegayaa doorashooyinka waxaa soo horaysay ta deegaanka . decembertii ina dhaaftay ayaanay ku ekayd. 371 xildhibaan oo Golayaasha deegaanka ah ayaana jira, waxay sugayaan xildhibaano deegaan oo la soo doortay oo badala, iska dareera wakhtigiinii wuu dhamaadaye miyaad cidna ka maqashay Mucaaradka” Ayuu yidhi Bulaale,
Had iyo jeer waxa lagu dhaliilaa Xisbiga Udub in taladiisu ka godo Madaxweynaha oo kaliya, arrintaa su’aal laga weydiiyay waxa uu ku jawaabay Bulaale, “Sow annagu ma xukuno dalka Madaxweynahana sow anagu maanu dooran,”
Waxa la weydiiyay oo kale tusaale ahaan, in Udub ka wada tashatay in cashuuraha wadanka la kordhiyo iyadoo xaaladu adagtahay sicir bararna dalka ka jiro “Tallo la’aan kumay imman waa wax laga wada hadlay oo laga tashaday oo loo arkay inay tahay wax dalka anfacaya, ee maaha wax Madaxweynaha kaligii khusaysa ama uu go’aan ka qaatay maaha” ayuu yidhi Bulaale.
Xoghayaha guud waxa uu ku dooday in dhaqaalaha xisbigu ku socdo ay kala siman yihiin Axsaabta kale oo mid kastaa miisaaniyada dawlada ku leeyahay toban milyan. “Haa way bixiyaan, qaadhaan dhaqaale, xubnihiisu oo qaarba waxbay bixiyaan.” Ayuu kaga jawaabay su’aal ku saabsanayd in xubnaha Xisbigu dhaqaale bixiyaan.
farhan mohamoud hidig
← Haya,adda GAA oo Qalab Ciyaareed ku Wareejisay Jaamacadda Burco
Wer deg dega: Madaxweyne Rayaale Iyo Gudoomiyayaasha Labada Xisbi Mucaarid KULMIYE iyo UCID Oo Kulan Isku Soo Horfadhiistay. →